Shirkadda Cayman iyo Koontada Bangiga ee khadka tooska ah - Macaashka iyo Qiimaha dulsaarka
Shirkadda Cayman ee Badda iyo Bangiga
Miyaad xiisaynaysaa diiwaangelinta shirkad iyo furitaanka akoon bangi oo ku yaal awood leh qaab dhismeed shirkadeed, dhexdhexaadnimo canshuureed, shuruudaha warbixin macquul ah, iyo taariikh sharciyeed adag? Shirkadda Cayman Islands iyo koontada bangiga ayaa laga yaabaa inay tahay waxaad raadineysay. Ilaa iyo inta aad bixisay dukumiinti ku habboon ee macmiilkaaga ah waxaan had iyo jeer iska diiwaangelin karnaa shirkaddaada gudahood 24-48 saacadood ee la oggolaado. Maskaxda ku hay, markan maahan dammaanad maadaama aan ku tiirsan nahay dowladda Cayman.
Haddii aad rabto inaad furato xisaab bangi oo loogu talagalay ilaalinta hantida, Jasiiradaha Cayman waa xulasho kale oo aad u fiican. Bangigeeda sirta Shuruucda ayaa ka mid ah kuwa ugu adag adduunka. Taasi waa, koox kasta oo shaaca ka qaadda macluumaad aan sharci aheyn waxaa ku waajibaya ciqaab adag oo ciqaabeed. Marka loo eego dib-u-eegista 2009 ee Qaanuunka Xiriirka Sirta ah (Ilaalinta), waa sharci darro in la faafiyo macluumaad qarsoodi ah. Sidoo kale waa sharci darro in la isku dayo, la bixiyo ama loogu hanjabo in la faafiyo macluumaadka sirta ah, ama si ula kac ah loo helo ama la isku dayo in la helo macluumaadkaas qarsoodiga ah.
Ku saabsan Jasiiradaha Cayman
Waxay ku taal badda galbeed ee Caribbean, Jasiiradaha Cayman waxay ka kooban yihiin Grand Cayman, Little Cayman iyo Cayman Brac. Tirada guud ee dadku waa qiyaastii 62,000. Caasimadda, George Town, waxay ku taal Jasiiradda Grand Cayman. Jasiiradaha Cayman waxay xornimo ka heleen Boqortooyada Ingiriiska 1960. In kasta oo, ay sii ahaanayaan dhul Ingiriis ah sidaas awgeedna qayb ka yihiin Boqortooyada Ingiriiska. Haa, xarumaha dhaqaalaha ee waaweyn sida New York, London, Hong Kong iyo Tokyo ayaa si wanaagsan loo yaqaan. George Town,, waa wax la yaab leh, inay tahay xarunta shanaad ee ugu weyn adduunka, kadib magaalooyinkan waaweyn. Warshadaha Adeegyada Maaliyadeed waa shaqo-bixiye weyn oo ku yaal Jasiiradda Cayman. Taasi waa, gobolka ayaa leh boqolaal bangi, oo ay ku jiraan laamo badan oo bangi shisheeye. Sidaas oo ay tahay, ma jiraan xirfadlayaal kooban oo bixiya adeegyo warshadaha maaliyadeed, oo ay ku jiraan qareenno, xisaabiyayaal iyo maareeyayaal lacag.
Jasiiradaha Cayman waxay ku raaxeystaan ​​sumcad caalami ah oo ah xarun maaliyadeed oo la aamino, qeybna taas waxaa u sabab ah sirta adag ee bangiyada. Faa'iido kale – Ingiriisiga waa luuqada rasmiga ah ee Jasiiradaha Cayman. Marka, looma baahna turjubaan dukumiinti loogu talagalay Mareykanka fadhigiisu yahay ama waddamada kale ee Ingiriisiga ku hadla. Intaa waxaa sii dheer, Jasiiradaha Cayman waxay fiiriyaan Waqtiyada Waqooyi ee Bari. Marka, sanadka intiisa badan waxay la mid tahay aag isku waqti ah Magaalada New York iyo aagaga kale ee Xeebta Bari ee Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, Caymaanyaashu ma dhawraan Waqtiga Keydadka Maalintii. Marka, ogow farqiga saacad ka hor waqtigan ee sanadka. Isku mid ahaanshaha aagagga waqtiga ayaa toos ula xiriiraya xiriiriyaha adeegga maaliyadeed ee xirfadleyda ah ama wakiillada dowladda ee kuwa inta badan Mareykanka ka sahlan.
Xisaabta Bangiga Jasiiradaha Cayman
Furitaanka koonto bangi dhexdeeda Jasiiradda Cayman kama badna furitaanka xisaab bangi deegaankaaga ah. Waxay u baahan yihiin aqoonsigaaga iyo arji. Maadaama ay qasab kugu ahayn inaad la kulanto fool ka fool, waxay u baahan doonaan dukumiinti-macmiilkaaga ah ee hoosta ku yaal.
Waa maxay faa’iidooyinka ay leedahay in xisaab bangi laga furo Jasiiradaha Cayman? Marka hore, xisaabaadka noocan oo kale ah, oo lagu daro kalsoonida ilaalinta hantida, waxay bixiyaan difaac hantiyeed dacwadaha. Gudaha Mareykanka, maxkamad ayaa xukumi karta in lacagaha lagu hayo bangiga Mareykanka ay si toos ah ugu socdaan kuwa deyn bixiyaha ah ama kuwa kale ee xukunka qaadanaya. Haddii lacagaha lagu hayo bangiga Jasiiradaha Cayman ee aaminka caalamiga ah, maxkamad Mareykan ma laha awood u leh xukunka shisheeye bangiyada iyo wakiillada.
Maskaxda ku hay in hay'adaha maaliyadeed ee shisheeye looga baahan yahay inay u soo sheegaan macluumaadka cashuurta IRS. Jasiiradaha Cayman, hayadaha noocan oo kale ah waa inay u soo sheegaan macluumaadka canshuurta ee ku saabsan kuwa heysta akoontiga Mareykanka masuuliyiinta Macluumaadka Canshuuraha Cayman (CITIA). Hay’adan ayaa ah tan kaliya ee Caymaan marka ay timaado bixinta macluumaadka canshuuraha dowladaha kale. Marka, waa CITIA inay u soo gudbiso IRS macluumaadka noocaas ah.
Akoon ku fura boostada ama internetka. Bangigu wuxuu kaaga baahan doonaa inaad keento caddeyn muujineysa inaysan jirin wax khiyaano ah ama kaqeybgal lacageed. Caddayntaas oo kale waxaa ka mid noqon kara:
Cadeyn Aqoonsi Kale
Macluumaadka maaliyadeed ee bangiga hadda jira
Warqadaha mushaarka ee ugu dambeeyay
Intaas waxaa sii dheer, badanaa waxay u baahan doonaan bangi iyo / ama warqad tixraac xirfad leh. Dukumiintiyadani waxay cadeynayaan inaad tahay qofka furaya akoonka. Intaas waxaa sii dheer, waxay ka caawinaysaa iyaga inay u hoggaansamaan shuruucda lacageed ee caalamiga ah.
Qiimaha dulsaarka Cayman Bank
Waxaad ka heli kartaa sicirka dulsaarka koontada bangiga ee Jasiiradaha Cayman oo la mid ah kuwa aad ku nooshahay. Haddii ay si weyn u sarreeyaan, waxaa jiri lahaa duulimaad deg deg ah oo duullimaadyo oo baananka kale waxay u baahnaan lahaayeen inay sare u qaadaan saamiyada dulsaarka si ay ula tartamaan. Marka, ma filayo in sicirka dulsaarku inuu aad uga sarreeyo ama aad uga hooseeyo sida ay yihiin waddankoodii. Waxa jira, si kastaba ha noqotee tiro aad u badan oo xulasho maalgashi ah.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad balaariso faylalkaaga, bangiyada badan ee Cayman waxay bixiyaan adeegyo maareyn maalgashi. Waxaan aragnaa macaamiil kasbanaya 8% ilaa 12% sanadkii Xirmooyinkan la maareeyey. Maskaxda ku hay, tani maahan lacag dulsaar toos ah. Tan ayaa ah in la helo maareeye xisaabeed kaasoo lacagtaada ku kala bixiya maalgashi ballaaran.
Shirkadaha Cayman Jasiiradaha Cayman
Nooca ugu caansan shirkad xeebaha Cayman Islands waa tan shirkada laga cafinaayo. Ma jiraan ugu yaraan magaalada Shuruudaha aasaasida shirkad noocan ah, iyo diiwaangelinta caddaynta maaliyadeed ee sannadlaha ah looma baahna.
Haddii ujeeddooyinka aasaasiga ah ee shirkaddu ay ka dhacaan meel aan ka ahayn Jasiiradda Cayman, waxay codsan kartaa diiwaangelinta ka dhaafitaanka Diiwaan Geliyaha Shirkadaha.
Shirkadaha laga reebay kama ganacsan karaan Jasiiradaha Cayman oo ay la lee yihiin hay'ad; taasi waa, marka laga reebo xoojinta ganacsiga ee shirkadda laga cafiyey ee ka baxsan Jasiiradda Cayman. Shirkadaha laga reebay kama yeeli karaan casuumaad dadwaynaha jasiiradaha Cayman ee la wadaago ama laga qayb qaato tigidhada. Si kastaba ha noqotee, qawaaniintu waxay u oggolaaneysaa dadka deggan jasiiradaha Cayman inay qabtaan saami shirkadeed laga dhaafay. Intaa waxaa u dheer, mid ayaa laga yaabaa inuu u isticmaalo saamiyada shirkadaha laga cafiyo si ay u qabtaan shirkad kale oo ka reeban. Intaas waxaa sii dheer waxay qaban karaan jasiiradaha Cayman jasiirad xad dhaaf ah, shirkado deyn xaddidan oo waxay yeelan karaan doorar aasaaska.
Shirkadaha laga reebay waa inay soo gudbiyaan calaamadaha xusuusinta ururka iyo qodobbada xiriirka. Dukumiinti hore wuxuu ka kooban yahay magaca shirkadda, oo ay tahay inuu si weyn uga duwanaado shirkad kasta oo jirta markaa ma jiro wax jahwareer ah oo ku saabsan aqoonsiga. Diiwaan Geliyaha ma aqbali karo magacyada shirkadda ay ku jiraan ereyada qaarkood, ama waa inuu si rasmi ah u oggolaadaa magacyadaas, oo ka mid ah:
Shirkadaha laga reebay uma baahna inay ku daraan ereyada sida Ltd. ama Inc. magaca shirkadda. Diiwaangelinta iyadoo la adeegsanayo shuruudaha LLC ama Shirkadda Caymiska Xaddidan lama oggola shirkadaha. Caadi ahaan, waxaa loo oggol yahay LLC-yada. Shirkad kasta oo laga reebay waa inay lahaato xafiiska diiwaan gashan ee Cayman Island. Bixiyaha xafiiskaan waa inuu heystaa liisanka howlahaan.
Xusuus-qorka ururku sidoo kale waa inuu ku jiraa alaabada iyo awooda shirkadda. Walxaha noocan oo kale ah waxay ku kooban yihiin oo keliya kuwa ku qoran dokumentiga. Shirkaddu waxay leedahay ikhtiyaar ay ku dooran karto walxaha aan la xadidin. Markaa, tani waxay u oggolaaneysaa inay fuliso ujeedo sharci ah oo kasta. Dukumintigaasi waa inuu kujiraa Baaqa Awoodda Xaddidan, wuxuu sheeganayaa mas'uuliyadda saamileyda sida ku xaddidan xaddi lacageed mararka qaarkood saamiyada saamilayda. Mabaadi'da shirkada laga reebay waxay bedelkeed go’aansan karaan in mas'uuliyadda saamileyda ay ku xaddidan tahay qadarka saamileyda ay oggolaadeen inay ku tabarucaan shirkadda haddii ay joogsato hawlgalka. Si kastaba ha noqotee, dad tiro yar ayaa doorta ikhtiyaarkan, waxayna dooranayaan ilaalinta ugu badan ee mas'uuliyadda.
Qaybta ugu dambeysa ee xarafka istiraatijiyadda ururku wuxuu khuseeyaa saamiga la wadaago ee la ogolyahay. Shirkadda laga reebay waa inay sheegtaa xaddiga raasamaalka saamiga la oggol yahay. Sidoo kale waa inay kujirtaa lambarada wadaag iyo qiimahoodaba, hal ama dhowr lacagood. Shirkad waxaa laga yaabaa inay kujirto saami raasumaal haddii qeybinta saamiyada aysan laheyn qiime go'an. Hase yeeshe, uma kala qaybin karo raasamaal kala jaad ah, iyadoo qaar ay leeyihiin qiime go'an qaarna aan lahayn. Sida awooda badan ee maalmahan, soo saarida saamiyada lama ogola.
Dukumentiga labaad, qodobbada ururku, wuxuu bixiyaa maamulka shirkadda guud. Waa inay kujirto tilmaamaha soo socda:
Arrinta shirarka xubnaha iyo xuquuqda cod bixinta
wadaag wax soo saar, wareejin iyo madax furasho
qaybinta lacag bixinta
sida ay shirkaddu u dareereyn karto.
Qodobbada ururku waxay kaloo la macaamilaan magacaabista agaasimeyaasha iyo saraakiisha iyo awoodooda. Caadi ahaan, ugu yaraan hal agaasime ayaa lagama maarmaan u ah shirkadda Cayman Islands, laakiin shakhsiyaadka noocaas ah maahan inay ku noolaadaan Jasiiradaha Cayman. Xaaladaha badankood, qodobbada ururku waxay sheegaan in maamulka shirkaddu ay tahay mas'uuliyadda guddiga agaasimayaasha.
Dhamaan shirkadaha laga reebay waa inay lahaadaan sadex diiwaan. Midda koowaad waa Diiwaangelinta Agaasimayaasha iyo Saraakiisha. Tani kuma koobna oo keliya magacyada iyo cinwaannada dadkan, laakiin ballantooda iyo taariikhaha bixitaankooda. Diiwaankan wuxuu u baahan yahay in laga xareysto Diiwaan Geliyaha.
Diiwaanka labaad waa xubnaha. Sidaasoo kale, waa inay kujirtaa magacyada saamileyda iyo cinwaanada. Intaa waxa u dheer, waxa ku jira tirada saamiyada midkasta uu haysto iyo in kale oo ay ku jiraan xuquuqda codbixinta. Waxay kaloo sheegaysaa xaddiga la siinayo saamiyada. Diiwaangelintani sidoo kale waa inay kujirtaa taariikhda saamile kastaa uu helay saamiyo, iyo taariikhda aysan hadda ka sii ahayn saamileyda shirkaddu. Ilaa iyo inta shirkadda aan shati shati u laheyn inay ganacsi ku sameyso Jasiiradaha Cayman, diiwaankan uma baahna inuu sii joogo dalka.
Diiwaanka seddexaad waa deynta iyo lacagaha. Markaa, waa inay kujirtaa macluumaad ku saabsan wixii deyn ah ama lacag bixin ah oo laxiriirta hantida shirkadda. Diiwaangelintu waa inay sheegtaa magacyada amaahda guryaha, iyo sidoo kale sharraxaad ku saabsan milkiileyaasha guryaha la amaahday.
Shirkadaha Cayman ee La-dhaafay iyo Xisaabaadka Bangiga
Shirkadaha gaamuray waxay akoonnada bangiga ka furan karaan jasiiradaha Cayman iyagoo bixiya dhammaan waraaqaha isku darka. Tan waxaa ku jira oo ay ku jiraan nuqulo la xaqiijiyay oo ah Isutagga Isutagga iyo Qodobbada Ururka. Bangigu sidoo kale wuxuu u baahan doonaa diiwaangelin la xaqiijiyay oo xubnaha ah. Ujeeddooyinka loo furay xisaab bangi, Bangiga Cayman wuxuu kaloo u baahan yahay daqiiqado la xaqiijiyay oo ah kulanka agaasimeyaasha ugu horreeya. Aqoonsiga dhammaan milkiileyaasha iyo agaasimayaasha ayaa loo baahan yahay, oo ay la socdaan nuqulo la xaqiijiyay oo ah baasaboorada iyo caddeynta deganaanshaha.
Canshuuraha Cayman Islands
Jasiiradaha Cayman canshuur kama qaadaan canshuurta shirkadaha. Intaa waxaa sii dheer, sidoo kale canshuur kama qaadaan dakhliyada ama hantida ka soo baxda shirkadaha ka reeban ee ka dalbaday Guddoomiyaha Gobolka ballanqaad. Waxqabadka noocan oo kale ah wuxuu ku wanaagsan yahay wadarta guud ee sannadaha 50, waxaana ku jira dhaxalka ama canshuurta guryaha, haddii loo dammaanad qaado.
Waxaa intaa dheer, dadka aan daganeyn qasab kuma ah inay canshuur kaqaadaan saami qaybsiga ama dulsaarka, ama lacag bixinta boqornimada. Jasiiradaha Cayman kuma soo rogaan canshuur dakhli shaqsiyeed ama canshuur guulaha waaweyn. Sidoo kale ma jiro wax qiimo-kordhin ah ama canshuur shirkadeed.
Canshuuraha kaliya ee jasiiradaha Cayman waxay canshuur ka qaadaan guryaha kaladuwan, iyo jaangooyada waajibaadka laga soo dejiyo.
Sida loo Furo Shirkadda Cayman iyo Xisaabta Bangiga
Ma dooneysaa inaad furato shirkad Cayman iyo koonto bangi? Hadey haa tahay, fadlan buuxi foomka wadatashiga bilaashka ah ee boggan. Haddii kale, waad wici kartaa mid ka mid ah lambarrada taleefannada halkan lagu taxay. Waxaa jira khibrad shirkadda offshore la taliyayaal halkan jooga inay kaa caawiyaan. Haddii aadan sida ugu dhakhsaha badan u helin qof, fadlan sii wad iskudayista ilaa aad ka helayso mid ka mid ah khubaradeena.